Izvo Zvaunofanirwa Kuteedzera Kuti Upwanya Zvako Zvokutendeuka | Martech Zone
Izvo Zvaunofanirwa Kuteedzera Kuti Upwanya Zvako Zvokutendeuka
China, November 13, 2014 Muvhuro, Ndira 9, 2017 Max Kremer
Mazuva ano, angangoita ese analytics zvishandiso kunze uko rega iwe uteedzere cnanzva zviitiko. Kubaya kunomiririra kwakawanda kwekudyidzana kune mushandisi newebsite yako. Asi kana uchinge uine iyo data, ikozvino chii? Iwe unogona kuteedzera pese pese kudzvanya kunoitwa nemushanyi, asi ndiwo mafashama e data kuti upepete. Dzvanya kuteedzera, kana ichinge yaiswa mushe, inogona kuva chimwe chezvishandiso zvine simba kwazvo zvekunzwisisa chaizvo kuti vanhu vanopindura sei zvemukati mako uye kuti kushambadzira kwako kunokanganisa sei faneli yako yekutendeuka.
Mune ino posvo ini ndichaisa nzira nhanhatu dzakareruka dzekukubatsira iwe nekudzvanya kuteedzera. Chinangwa changu ndechekubatsira iwe kuunganidza inoitisa dhata kuti unzwisise kukosha kwewebsite yako uye unzwisise kugona kwemhando dzakasiyana dzesaiti optimization.
1. Usateedzera zvese
Haasi ese mabhatani akagadzirwa akaenzana. Chikamu chidiki chete chesaiti yako yeUI yakazara ndiyo inonyanya kudikanwa kuteedzera. Kana chiito chisinga ratidze chepamusoro-kupfuura-avhareji kufarira mubhizinesi rako, ingori ruzha. Izvo hazvizokupe iwe chero nzwisiso mumaitiro evashanyi vako vepamusoro Kubaya pakufambisa, pagination uye mu-zvinyorwa zvinongedzo hazviwanzo kukodzera kuteedzerwa, kunze kwekunge zvisingawanzoitika mamiriro.
2. Tevedzera kutaurirana kunonzwisisika
Tarisa zvinhu zvaungade vangangoita vatengi kuti vaite. Panyaya ye e-commerce, ndizvo Wedzera yekutengera link uye iyo Buda bhatani, uye mamwe emapeji ari munzira yakaoma kune iwo. A Kumbira Quote fomu kana fomu rekubatanidza rinoshandiswa kutungamira chizvarwa vari vaviri vakanaka musarudzo. Panyaya yebasa repamhepo kana kunyorera SAAS, iyi link kune yako peji yemitengo inzvimbo yakanaka yekutanga.
3. Funga nezve nhanho muhupenyu hwevatengi hwako
Tevera zvinhu zvinoratidzira shanduko kubva kune rimwe rematanho ehupenyu kuenda kune rinotevera. Heino e-commerce muenzaniso:
kutora - Mushanyi anosvika pawebhusaiti yako mushure mekutsvaga kana kudzvanya pane chinongedzo pane imwe saiti. Teedzera kubaya pane iyo Bhurawuza Zvigadzirwa bhatani.
Pre-Kutenga / Saina Up - Iye munhu anotengesa akatenderedza kana kuita neyako sevhisi. Teedzera kubaya pane iyo Nyorera or Create Account bhatani.
kupana nduma - Munhu anodzoka kuzoshandisa yako saiti. Teedzera kubaya pane iyo Wedzera yekutengera bhatani.
Kutenga / Kutendeuka - Munhu anotenga chimwe chinhu kana kuzadza fomu inotungamira-chizvarwa. Teedzera kubaya pane iyo Buda bhatani.
zvivabatsire - Munhu anogovera yako saiti pasocial media kana kukoka vamwe. Teedzera kubaya pane iyo Facebook Senge widget.
Ehezve, maitiro ari pamusoro achasiyana kubva kubhizinesi kuenda kune bhizinesi, asi iwe unowana iyo pfungwa.
4. Shandisa iri nyore ratidziro system
Chimwe nechimwe chinhu cheUI chaunoteedzera chinofanira kuve nezvibodzwa. Zvinogona kuve zvakapusa se1 kusvika 10, kana muzana. Rudzi rweyero system yaunoshandisa haina basa chaizvo, sekureba sekuenderana. Ingo shandisa icho kuyera kukosha kwekudyidzana kwacho. Maitiro aya anokumanikidza kuisa pamberi pezviito zvevashandisi, izvo zvinobatsira kugadzira mishumo ine musoro. Semuenzaniso, unogona kugadzira mushumo unokuratidza vanhu vese vakaita zvinhu zvitatu kana kupfuura vane mamakisi 3/95.
5. Rongedza zviitiko zvako zvekudzvanya uchishandisa magungano ekupa mazita
Usati wabatwa mune izvo zvinyorwa, tanga wafunga mhando dzezvinhu izvo munhu anogona kusangana nazvo pane yako saiti. Chikamu chakajairika mavhidhiyo. Nekudaro, kana iwe uine akati wandei mavhidhiyo pane yako saiti, iwe ungangoda kuve wakasarudzika nemavhidhiyo ako zvikamu.
Semuenzaniso, ngatiti vashanyi vane sarudzo yekudzidza zvakawanda nezvechigadzirwa chako nekuona mavhidhiyo ekutengesa, uye vanogona zvakare kushanyira chimwe chikamu chemavhidhiyo ekudzidzisa. Aya mapoka maviri akasiyana kwazvo. Kuti usiyane navo, unogona kunongedza zviitiko zvako zvekudzvanya nazvo Vhidhiyo - Kutengesa, nekuti iwe unoda tarisiro yekudzvanya aya mavhidhiyo. Chikamu chechipiri che Vhidhiyo - Kudzidziswa ingangotarisisa vatengi vemazuva ano vanofarira kudzidza zvakawanda.
6. Shandisa kudzvanya kuteedzera kuteedzera izvo zvisingataurike
Kunyora template kana peji kunogona kuvhundutsa kune wepakati mushambadzi. Uye kushanda pamwe neboka rako rekuvandudza uye agency zvinogona kutora nguva kana kutotadza kuita shanduko dzakakodzera pane yako nzira yekutevera. Kuedza moto iri yekuona mupepeti yekumisikidza webhu analytics. Kuedza moto kunokutendera kuti ufambe kuburikidza newebsite yako semushanyi wenguva dzose, asi bhatani rega raunoita rinokupa kugona kuwedzera 'pini yekutevera'. Iwe unogona kuwedzera pini yekutevera kune chero chinhu, kusanganisira zvinongedzo, bhatani, uye minda.
Tags: kutora kutsvagaWedzera kungoroAnalyticsanalytics chiitiko chekuteveraBudachiitiko chekuteverachiitiko chekutevera applicationchiitiko chekutevera mushandisi interfacepre-kutenga yekuteverakutumirakukumbira chirevokusaina kutevera
Max Kremer ndiye Co-muvambi uye CTO ye Kuedza moto, edhisheni yekuona yekumisikidza web analytics.
Max anorarama achidya nekufema tekinoroji, midhudhudhu, uye munguva pfupi yapfuura, ita-iwe-pachako mapurojekiti ekuvandudza. Anozunza ndebvu dzechando.
Dhizaini Haigone Kununura Zvakundikana Zvemukati